I-Apple patent ibonisa indlela abanokuyisebenzisa ngayo i-Liquid Metal | IPhone iindaba
Ilungelo elilodwa lomenzi le-Apple libonisa into abanokuyisebenzisa kwiLiquid Metal
I-Patent ibandakanya indlela enokusetyenziswa ngayo i-Liquid Metal
Ukusukela ukuba iApple yafumana okukhethekileyo ukusebenzisa ingxubevange enganyangekiyo eyaziwa njenge Isinyithi eselulwelo o Ulwelo nge-2010, kuye kwakho intelekelelo eninzi malunga nokuba inkampani yaseCupertino ingasisebenzisa njani esi sinyithi. Ukusukela ngoko, kwaye phantse iminyaka emi-6 idlulile, inqaku kuphela lezixhobo ezahlukeneyo ze-Apple esizibonileyo kukwitreyi yeSIM khadi ye-iPhone.
Ekuqaleni, eyona nto isengqiqweni yayikukucinga ukuba izakusetyenziselwa ukwakha izindlu kwiLiquid Metal, kodwa okwangoku iindleko zayo zokuvelisa ziya kuba phezulu kakhulu, nangona kungagunyaziswanga ukuba oku kuya kutshintsha kwikamva (kwaye , enyanisweni, ihlala injalo kulo naluphi na uhlobo lwetekhnoloji). Impendulo yokuba kutheni iApple isayine ukuhlala kunye nokukodwa kwale alloy inokulala kwilungelo lomenzi elitsha elinikezelwe izolo kwaye ligqithe ngaphaya Itreyi yeSIM khadi.
Intsimbi engamanzi ingabandisa ubomi beqhosha lasekhaya
Ndiqinisekile ukuba bazakubaninzi abasebenzisi abangayithandiyo kwaphela le patent: I-Liquid Metal ingasetyenziselwa ukuphucula ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide kumaqhosha omzimba kwizixhobo zeApple. Njengoko ubona kumfanekiso ongaphambili, iqhosha lokuqala ngumgqatswa ofanelekileyo wokusebenzisa i-Liquid Metal echazwe kule patent. Le fom iqinisekisa ukuba amaqhosha omzimba aneengxaki ezimbini:
Ukuveliswa okuqhelekileyo kwala maqhosha kuphunyezwe ngamaqhosha edome akwanele kwaye kuyinkimbinkimbi […] Ukubekwa kwezinto ezenziwayo ngokunxulumene nendlu akusoloko kuchanekile ngendlela ebekunqweneleka ngayo. Umzekelo, ukuba intsebenzo ayihambelani ngokuchanekileyo nendawo yombindi wedome, ingxelo ethambileyo yelo dome iya kuthinteleka kwaye ngenxa yoko ingabi yomelele njengoko bekucetyiwe […] Kwelinye icala, ngenxa yomda ophantsi wokuqina , xa ikhubazekile, isondela kwindawo yayo yokujika iplastiki iphantsi koxinzelelo oluncinci ebeka umngcipheko wokungakwazi ukubuyela kwimo yayo yokuqala.
Ngokuka-Apple, i-Liquid Metal isombulula zonke ezi ngxaki. Kodwa ngaba isicelo selungelo elilodwa lomenzi sithetha ukuba iqhosha lasekhaya liya kuhlala likho kwii-iPhones zexesha elizayo? Ngokoluvo lwam, akunjalo. Nangona emfanekisweni sibona ngokucacileyo iqhosha lokuqala, kufuneka sithathele ingqalelo ukuba iapile smartphone inamanye amaqhosha, anjengevolumu kunye nokulala, apho kutshintshelwe khona iswitshi ukubeka isixhobo ukuthula. Ukuba sijonga ngasemva, i I-iPhone 5 ibinengxaki ngeqhosha lokulala Ngekhe ibekho ukuba basebenzise i-Liquid Metal. Kodwa kufuneka iqatshelwe into yokuba izinto zikhangeleka zibi kubo bonke abo basebenzisi abakhetha ukuba iqhosha lokuqalisa liphele. Njengesiqhelo, siyakwazi kuphela ukuba le patent isetyenziswa ekuhambeni kwexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ilungelo elilodwa lomenzi le-Apple libonisa into abanokuyisebenzisa kwiLiquid Metal
I-FBI iya kubhena kwisigqibo senkundla yaseNew York